Dlala Amasayithi We-Poker aku-inthanethi - Amakhodi Ebhonasi Yekhasino aku-Inthanethi
Play Online Poker Amasayithi
(843 amavoti, isilinganiso: 4.00 out of 5)
Iyalayisha ... Leli khasi lizinikezele ekulethe imininingwane kanye namabhonasi kuwo onke amasayithi aphezulu e-inthanethi e-poker. Zonke izingosi ezibalulwe kuleli khasi zivumela abadlali ukuba badlale ngemali yangempela, kodwa ngakho-ke yenza amanethiwekhi amaningi we-poker e-intanethi. Sifake phakathi kwazo zonke izindawo zangempela zemali ze-poker, futhi siza nalokho esikholelwa ukuthi yizona siteshi ezintathu ezinhle kakhulu zokudlala i-real real poker online. Zonke ezintathu zalezi zingosi zinezici zemali yokudlala kanye nenhlobo yangempela yemali, kodwa amathuba okuba uthanda ukudlala imali yangempela uma ufunda leli khasi.
Uhlu Top 10 Poker Amasayithi
MAYELANA IDLALA YANGEMPELA IMALI Poker
Ngakho-ke uzame i-poker ye-Facebook noma iZynga futhi wenze kahle kakhulu. Noma uke wadlala kancane ku-inthanethi kumatafula okudlala imali endaweni yangempela ye-poker njenge-888poker noma i-PokerStars noma i-Full Tilt Poker.
Uyini umehluko nento yangempela?
Uyini umehluko phakathi kwalokho namatafula we-poker wemali yangempela? Bangakanani nje abadlali bezezimali zangempela? Zingakanani iziteki ezijwayelekile? Ngingadlalela imali encane kangakanani?
Iningi labadlali abafuna ukwenza i-jump to real money poker online banemibuzo eminingi. Futhi ukungena ngaphakathi kungabonakala njengesiphakamiso esesabekayo. Kepha akumele kube njalo.
Futhi ngenkathi i-play-money poker impela ingumdlalo ohlukile kune-real-poker, uma wenze kahle emidlalweni yamahhala kungenzeka ukuthi unawo wonke amakhono owadingayo ukuze wenze kahle entweni yangempela.
Eqinisweni, ungathola nempumelelo ethe xaxa njengokungaqiniseki kwe-play-money poker (ngoba akubona abadlali bemali bangempela abanendaba nokulahlekelwa ama-chips abo bese benza ukuhamba okuhle) kuba nokuqagela okuningi - nokuxhaphaza okuningi - ku imidlalo yemali yangempela.
Real Money Online Poker ihlukile kune-Google Imali
Kasibili wonke umuntu uqala e ngemali yokudlala poker ngaphambi kokudlulela zangempela imali poker uyavuma imidlalo play imali iyindlela enhle into eyodwa: ukufunda izisekelo.
Lapho kunemali yangempela kulayini, imidlalo iyashelela.
Amahora ambalwa kumatafula wokudlala abalulekile ekutholeni umuzwa womdlalo - ukuhleleka kokudlala, ukwenza ukubheja, ukuzivumelanisa nejubane lesenzo, ukuthi izilawuli zisebenza kanjani nokuningi.
Uma unethemba lokufunda isu elisebenzayo le-poker yangempela kulowo mdlalo, noma kunjalo, ukhonkotha isihlahla esingalungile. Ingxenye enkulu yabadlali bemali yokudlala ikhululekile futhi ayinaki - futhi kungani kungenjalo?
Abanakho ukuwina futhi akukho lutho lokulahlekelwa, ngakho-ke benza ngokukhululeka ukubheja okuphambene nokushaywa ucingo. Uma seziphelile, zivele zicele okungaphezulu. Bese uhamba bese uwachitha ngendlela efanayo.
Lokhu nje akwenzeki ku-poker yemali yangempela - noma kuma-microstake ayi-1 ¢ / 2 ((yize usazothola izinombolo ezimbalwa zikanuni ezikhululekile zincishiswe kakhulu).
Kunabadlali abaningi abesabekayo, impela. Kepha abasona isihogo esizimisele ngokulahlekelwa ama-chips abo ngokushesha okukhulu. Eqinisweni, yize imidlalo ingaba mincane kangakanani - nokuthi ingcuphe engakanani yezezimali - abanye abadlali babambelela kuma-chips abo ngempilo ethandekayo.
Lokhu kusho ukuthi banokuqagelwa ngokuphelele okungu-100% ematafuleni. Nemali ebonakalayo ephaketheni lakho. Kunoma ikuphi, akukho ukuqhathanisa.
Qala ngokwehlisa ingxenye ephansi umkhawulo imali yangempela imidlalo futhi asebenze Yenyukela
Imidlalo ye-poker yemali yangempela ilapho isenzo "sangempela" sikhona. Isu lithandeka ngokwengeziwe, abadlali bayahambisana futhi imidlalo iyashaywa kakhulu - uma wazi okuncane ngalokho okwenzayo kunjalo.
Awudingi ukuchitha imali eningi ufunda izintambo futhi. Amakamelo amaningi we-poker - kufaka phakathi wonke amasayithi abhalwe ngenhla - anikela ngamakhulu ezinketho ezinomkhawulo ophansi kusuka ku-1 ¢ / 2 games imidlalo yemali kuya emiqhudelwaneni yetafula elilodwa.
Ukuvula amapeni ku Nickels
Inala umdlalo isenzo for pennies.
I ziqalise acishe kweso ngefomu ezithile futhi ungase uzithole esihlalweni ngokoqobo imizuzu ngemuva kokuthi udale i-akhawunti yakho.
Okungcono kakhulu kulezi zinsuku amasayithi amaningi we-poker athuthele kumodeli eqhutshwa ngabadlali lapho uvikeleke kubadlali abanolwazi oluningi kumasayithi. Uzodlala kumatafula aqalekayo, ube nesikhathi esiningi sokuzivumelanisa nomdlalo futhi akudingeki ukhathazeke ngokungena ngokushesha kwekhanda lakho.
Ungakwazi ukufaka imali nge-Debit noma Credit card (Visa, MASTERCARD njll). Le nqubo kulula futhi uzobe edlala ematafuleni ngaphambi kokuthi wazi. Ngokuzayo singase sibe ngisho entsha idiphozi ukhetho wanezela, like isibonelo Bitcoin. Namhlanje lokhu akukona ejwayelekile idiphozi ukhetho.
Ingabe imali yangempela inthanethi poker imidlalo engokomthetho?
Omunye wemibuzo evame kakhulu abadlali abasha be-poker abanemali yangempela ngukuthi “ngazi kanjani ukuthi imali yami iphephile” nokuthi “ngazi kanjani ukuthi kusemthethweni yini lapho ngihlala khona.”
Impendulo yalokhu, kunjalo, kuya ngokuthi uhlala kuphi. Emagunyeni amaningi emhlabeni jikelele, futhi ikakhulukazi kulo lonke elaseYurophu, ama-poker asebenzisa imali yangempela online alawulwa, anamalayisense futhi avikelwe abathengi izinhlangano eziningi kubandakanya ohulumeni bezindawo kanye neziphathimandla zelayisense zezifunda.
uma udlalela imali yangempela kunoma yiziphi izingosi ze-poker esezinesikhathi eside zenziwa njengeSpartanSlots, i-Planet7, i-NYC, njll njll.
I-poker ethengisa imali yangempela njengamanje isesimweni sokuxhamazela e-United States. Umthetho usuqhubekela phambili wombuso ne-Nevada, Delaware neNew Jersey okwamanje okuwukuphela kwezindawo lapho kunamalayisense futhi kudonswa intela njenganoma yiliphi elinye ibhizinisi.
Amazwe afana neCalifornia, iPennsylvania neNew York asemuva kakhulu futhi kubonakala sengathi unyaka we-2016 kuzoba unyaka wentuthuko yemithetho ye-poker online. Futhi, emazweni amaningi emhlabeni, imali yangempela eku-inthanethi iyisivumelwano esivunyelwe ngokuphelele, uhulumeni kanye nemboni esebenza ngasese ngayo yonke imithetho efanele nokuvikelwa ongakulindela.
Online Poker uhlale etholakala
Bheka ukubuyekezwa kwesiza sethu se-poker sangempela semali ngenhla futhi kungekudala uzobona izinketho zakho cishe zingenamkhawulo uma kukhulunywa ngesitayela semidlalo ye-poker oyithandayo.
Futhi ingxenye engcono kakhulu ungakwazi ngokushesha ukufunda konke odinga ukukwazi ukuze ube play ngokuwina i-, okungenani, a bucks ezimbalwa ngosuku. Uma uthola nokujwayela, ngokuwina kuyoba zonke imnandi.
Hlola isigaba sethu sesisombululo se-poker ngezinsisekelo ezidingekayo ukuze uqale ukwenza inzuzo encane ku-intanethi bese uhlola izibuyekezo zethu zamakhodi ebhonasi okukhethekile kanye nokunikezwa kwe-freeroll.
Inhlanhla - futhi ujabulele ukugibela!
0.1 Uhlu Top 10 Poker Amasayithi
2.1 MAYELANA IDLALA YANGEMPELA IMALI Poker
2.2 Real Money Online Poker ihlukile kune-Google Imali
2.3 Qala ngokwehlisa ingxenye ephansi umkhawulo imali yangempela imidlalo futhi asebenze Yenyukela
2.4 Ingabe imali yangempela inthanethi poker imidlalo engokomthetho?
2.5 Online Poker uhlale etholakala